ခရစ္စမတ်စုဆောင်းခြင်းမိတ်ကပ် Chanel 2016
အောက်တိုဘာလ 16 ရက်နေ့တွင်အာရှ, ရုရှားနှင့်စတိုးဆိုင်များတွင် 2015 နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. « Chanel Rouge အဆိုးမြင်အန္တရာယ်အားလပ်ရက်ငွေကောက်ခံ 2015-2016 »အောက်တွင် 2016 ခုနှစ်ခရစ္စမတ်မိတ်ကပ်စုဆောင်းခြင်း Chanel ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်အဆိုပြုထားအပေါငျးတို့သတီထွင်မှုမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
ခရစ္စမတ်မိတ်ကပ်စုဆောင်းမှု၏သမိုင်း Chanel 2015-2016
ခရစ္စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးထံအပ်နှံစုဆောင်းမှု, အားလပ်ရက်မတိုင်မီအကြောင်းကိုနှစ်လစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဘာသူတို့ကတောက်ပသောဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများကဦးဆောင်အိမ်မှာ stylist မှာပြီးပြည့်စုံသောမိန်းမ, မြင်သောပြသ ကားလ် Lagerfeld လာမယ့်ရာသီအတွက်။ ထိုသို့သောပစ္စည်းများတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်မိတ်ကပ်ကိုဖန်တီးရန်သင့်လျော်သောမိတ်ကပ်များမှာ, ဒါသည်ဤရန်ပုံငွေများကိုအများစုတောက်ပချောနှင့် shimmering သက်ရောက်မှုနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။
နှစ်ပေါင်း 20 ကျင်းပနေသော Rouge အဆိုးမြင်အန္တရာယ်များ၏အစွန်းရောက်လက်သည်းဆိုးဆေးအရိပ်၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ထံအပ်နှံခရစ္စမတ်စုဆောင်းခြင်းမိတ်ကပ် Chanel 2015-2016 ဒီနှစ်။ 80 မော်ဒယ်များတွင်မကြာခဏတမင်နောက်ပြီးမပါဘဲရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာမှ ယူ. , မကြာခဏရိုးရိုးလက်သည်းပန်းချီမ။ အဆိုပါပြပွဲ၏တဦးတည်းတွင်ဒီဇိုင်နာများကြက်သွေး-အညိုရောင်ပြည့်နှက်မော်ဒယ်များလက်သည်းအမှတ်အသား Hatch ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ "နောက်ပြီး" bombshell နှင့်အတူ output မော်ဒယ်များ။ ရှာနေအချိန် Trendsetters နှင့်သင့်လျော်သောယွန်းအရိပ်၏စင်ပေါ်အပေါ်ကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ထိုအခါဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်သုတ်ဆေး Chanel Rouge အဆိုးမြင်အန္တရာယ်၏ပထမဦးဆုံးစီးရီးဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်နှင့်နောက်ဆုံးမှာတစ်အစွန်းရောက်အရိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်တစ်ဦးဂန္၏ status ရရှိခဲ့သည်။ အမှန်မှာထို femme fatal ၏ပုံသဏ်ဌာ, femme fatal ကြက်သွေး-အညိုရောင်တန်ချိန်အတွက်လက်သည်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ပြီးမပါဘဲစိတ်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။
2016 ခုနှစ်တွင် Chanel အားဖြင့်ခရစ္စမတ်စုဆောင်းမှု၏ဖွဲ့စည်းမှုမိတ်ကပ်တစ်ဘက်စုံနှင့်စဉ်းစားဟန်လမ်းဖန်တီးခွင့်အလှဆင်အလှကုန်၏နည်းလမ်းများပါဝင်သည်။
ပွင့်လင်းရိပ်စုဆောင်းခြင်း Chanel က Les4Ombres Sign Particulier - နယူး & လီမိတက် Edition ကို။ လေးအရောင်များဒီပိုက်ကွန်: ကျောခိုင်းထားသောအညိုရောင်-ခရမ်းရောင်ကတ္တီပါခရမ်းရောင်, အညိုရောင်အနီရောင်အနက်ရောင်အနီရောင်နှင့်ရွှေရောင်ရွှေဝါရောင်ရွှေတစ်ဖဲတောက်ပြောင်ဖဲ Beige သပန်းရောင်နှင့်အတူအဝါနုရောင်ရှိသော။ စကားမစပ်, ရွှေအဘယ်သူမျှမအရိပ်အမြွက်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်တစုံတယောက်သောသူသည်ခရစ္စမတ်စုဆောင်းခြင်းမပြုပါဘူး။ ဒီနှစ်ရွှေတစ်စက်ဒီနောက်ဆုံးအရိပ်ပန်းကန်တွေ၏အရိပ်အဖြစ် eyeliner အတွက်တိကျစွာတည်ရှိသည်။
eyeliner မိတ်ကပ်နှစ်ခုအရိပ်ပဲကန့်သတ်စုဆောင်းခြင်း: လီမိတက် Edition ကို - အလွန်ကိုရွှေ Chanel က Le Crayon Yeux Precision မျက်လုံးပုံစံလုပ်ရန် - အရာန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းခြင်း, Chanel က Le Crayon Khol ပြင်းထန်သောမျက်လုံးခဲတံလက်သည်းဆိုးဆေးများ၏အရောင်များဘုရားရဲ့လီမိတက် Edition ကိုများနှင့်ကြက်သွေး-အနက်ရောင်, ။
ပိုက်ကွန်ကိုလည်းအရိပ်-မီးမောင်းထိုးပြပါဝင်သည်။ သူတို့က Chanel Joues Contrast Lumiere Highlighting မျက်နှာမပျက်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည် - လီမိတက် Edition ကိုနှင့်မက်မွန်-အဝါနုရောင်ရှိသောအရိပ်ရှိသည်။ ပိုများသော, သင်တန်း, သူတို့တစ်တွေအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည် ကိုမီးမောင်းထိုးပြ သူတို့တစ်တွေတော်တော်လေးပြင်းထန်ထွန်းလင်းရှိသည်နှင့်အရေပြားနူးညံ့သိမ်မွေ့အလင်းရောင်ပေးအဖြစ်။
857 Rouge အဆိုးမြင်အန္တရာယ် - ခရစ္စမတ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အထင်ကရအရောင်တင်ဆီနှင့်အတူအမည်တူ၏မုန့်အရိပ်ထဲတွင်ပါဝင်သည်။ အမည်တူ၏မှောင်မိုက်အရိပ်ဟာ Chanel Illusion က D'Ombre Long ကအလင်းအား Eyeshadow Wear ရှိသည်။
ကန့်သတ် Edition ကိုဂန္ထဝင်ပြင်းထန်သောအနက်ရောင် (နံပါတ် 90) နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းတဲ့အနက်ရောင်နှင့် burgundy (နံပါတ် 27) အရိပ် - များနှင့် mascara နှစ်ခုမျိုးကွဲ Chanel က Le Volume ကိုက de Chanel Mascara မျက်စိမိတ်ကပ်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်နှင့်အနက်ရောင်နဲ့အနီရောင်အရောင်လီမိတက် Edition ကိုနှင့် Matt Raspberry Chanel Rouge သှေးဆောငျကတ္တီပါအလင်းအား Matte နှုတ်ခမ်းအရောင် - - လီမိတက် Edition ကိုဒီအသုံးနှုတ်ခမ်းနီနှစ်ခု Chanel Rouge သှေးဆောငျအလင်းအားပြင်းထန်သောနှုတ်ခမ်းအရောင် shimmering အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။
Chanel ကနေဒီစုဆောင်းမှုဖြည့်စွတ်နှစ်ခု gloss ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှပါစေ: Chanel Levres Scintillantes Glossimer - လီမိတက် Edition ကို, သို့မဟုတ်ကို double-တဖက်သတ်အရည်နှုတ်ခမ်းနီ Chanel Rouge ကိုနှစ်ချက် Intensite က Ultra နှုတ်ခမ်းအရောင် Wear ။
စုဆောင်းခြင်း Chanel ခရစ္စမတ်သုံးနောက်ပြီးအထဲကရှာနိုင်ပါတယ်။ တူညီသောအရေအတွက်က 18, №757နှင်းဆီ Fusion မှာယွန်း Rouge အဆိုးမြင်အန္တရာယ်နှင့် sequins Lame Rouge အဆိုးမြင်အန္တရာယ်နှင့်အတူထိပ်တန်း။
က Short ဆင်မြန်း 2017 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, ခေတ်ရေစီးကြောင်း, သတင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်
ရှိရမည် - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
Mink အင်္ကျီ 2016
က Igor Chapurin
Mackerel များအတွက် Marinade - Pickled များအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ, ဖုတ်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်မတိုင်မီ
အမျိုးသမီးတွေ 50 နှစ်တာဆင်မြန်း
အဆိုတော် Adele နှင့် Ellen ဖြစ်သည်ဟုသမ္မတကတော်တစ်ဦးတောက်ပချီတက်ပွဲလုပ်
ကြမ်းပြင်မှဝတ်စားဆင်ယင် - ညနေပိုင်းတွင်, ပေါ့ပေါ့နှင့်ပိုပြီး!
ဒစ္စနေးမင်းသမီး« Playboy »၏သံမဏိပူပစ္စည်းပစ္စယသာလူကြီးများအတွက်!